Pages: 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 » | Go Down
Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 493938 times)
« on: February 26, 2011, 09:51:30 PM »
မိန်းမ နဲ့ ယောက်ျား
လင်မယားနှစ်ယောက် ကားမောင်းလာရင်း အတော်ကြာတဲ့အထိ စကားမပြောကြဘူး။
ဖြစ်ပုံက ဒီလို... ကိစ္စတစ်ခုကို ငြင်းကြရင်း ဘယ်သူ့ဘက်ကမှ မလျှော့ကြတာနဲ့
ခဏနေတော့ မြည်းခြံ၊ ဆိတ်ခြံ၊ ၀က်ခြံတွေကို ကားမောင်းရင်း ဖြတ်လာတော့
ယောက်ျားက ရိသဲ့သဲ့လုပ်ပြီး ``မင်း အမျိုးတွေလား`` လို့ တင်စီးပြီး
မိန်းမက တခွန်းပက်ကနဲ ပြန်ပြောတယ်။ ``ဟုတ်တယ်၊ ယောက်ျားဘက်က ဟာတွေလေ`` တဲ့။
``ငွေသား၊ ချက်လက်မှတ်၊ အကြွေးကဒ် ဘာနဲ့ ပေးမလဲခင်ဗျ``
သူ(မိန်းမတစ်ယောက်)၀ယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အိတ်ထဲထည့်ပေးရင်း
အဲဒီမှာပဲ ပိုက်ဆံအိတ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ မိန်းမရဲ့ လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှာ
``အပြင်သွားလည်း တီဗီရီမုတ် ယူလာသလားဗျ`` မေးကြည့်တော့
``ဟုတ်ပါဘူးရှင်၊ ယောက်ျားရေ... ဈေးလိုက်ခဲ့ပါလို့ ခေါ်တာ မရတာနဲ့
ခွင်ထဲက လုပ်လို့ရတဲ့ သူအနစ်နာဆုံး သင်ခန်းစာ ပေးရတာပါရှင်`` တဲ့ဗျာ။
ယောက်ျားက ဆောင်းပါးတစ်စောင် ဖတ်နေရင်း ``မိန်းမတွေက တစ်နေ့ကို
စကားလုံးပေါင်း သုံးသောင်းလောက် သုံးစွဲ ပြောဆိုကြပေမယ့် ယောက်ျားတွေက
စကားလုံးပေါင်း တစ်သောင်းခွဲပဲ သုံးကြတယ်တဲ့ကွ``
မိန်းမလုပ်သူက ``အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲ ရှင်သိလား၊ ဘာဖြစ်ဖြစ် ရှင်တို့ကို
``ဘာ`` (မိန်းမက နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြောရပြန်ရော)။
ယောက်ျားက သူ့မိန်းမကို မေးပြော ပြောလိုက်တယ်။
``ဘာဖြစ်လို့ မင်းဟာ လှလည်းလှ တုံးလည်းတုံး ရသလဲ မသိပါဘူးကွာ``တဲ့။
``ရှင်းပြပါရစေ ကိုအ၀ှာ... ဘုရားသခင်က ကျွန်မကို ချောအောင်
ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်၊ ဒါမှ ရှင်က
ကြိုက်တော့ မပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်နော်၊ အကုန်သိတယ်၊ ကျွန်မကို
ခပ်တုံးတုံး ဖြစ်အောင်လည်း လုပ်လိုက်တယ်၊ ဒါမှ ရှင့်ကို
(ကျေးဇးပြုပြီး အနီရောင်ကို မော့နဲ့အက်ဒမင်တွေ နိူ့တစ်ပေးရာမှာသုံးဖို့ ချန်ထားပေးပါ ။ ။ဒိသာ)
« Last Edit: March 03, 2011, 11:00:34 PM by deedthar »
« Reply #1 on: February 26, 2011, 09:59:30 PM »
နဲ့ ပို့ စ်အသစ်တွေမတင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေမိတယ်ဗျာ။လာလည်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကို
ငါ့နာမည်=ပီတာကွ။ငါ့ဂျီမေးလ်က peter12345@gmail.com ကွ
ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ တင်ထားကြပါတယ်။နောက်နေ့ မှာတော့စာတစ်ကြောင်းလာရောက
ဟီးငါ့နာမည်တကယ်တော့ နေမင်းထွန်း ကွ
သူ့ ဂျီမေးလ်ကိုလည်းဟက်ချင်တာကြာနေပြီဒါကြောင့်ငါမဟက်တတ်လို့ 
မင်းတို့ဟက်ကာပညာတော်ပါတယ်ကွာ
(ကဲဆရာလုပ်နေတဲ့။ ကြိုးစားနေတဲမိတ်ဆွေတို့ ရေစူပါဟက်ကာတွေကိုလည်းသတိထားနိုင်ကြပါစေ)
နာဆာ ရဲ့ ဘောပင်ပြသနာ
အာကာသထဲရောက်သွားရင် ဘောပင်တွေက မှင်မထွက်တော့ဘူးတဲ့
အဲဒါနဲ့နာဆာလည်း လေဟာနယ်မှာ မှင်ထွက်တဲ့ ဘောပင်ကို
နဲ့ အဆင်ပြေနေလဲလို့ လူလွှတ်ပြီးစုံစမ်းတော့
လမ်းဖြတ်ကူးသူများ ဖိနပ်စီး၍ လမ်းလျှောက်လျှက်ရှိ။
၂။ AIDS ရောဂါကို လူတိုင်း ကြောက်ရွှံ့။
၃။ တရားသူကြီးများ တရားစီရင်ရေးကိစ္စ ဆွေးနွေး။
၄။ နှာခေါင်းတွင် အပေါက်နှစ်ပေါက် မပါရှိပါက လူအများ အသက်ရှူရာတွင် အခက်အခဲများ တွေ့နိုင်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များဆို။
၅။ အခိုးခံရသော ပန်းချီကားများ ပျောက်ဆုံးလျှက်ရှိ။
၆။ ကျောင်းသားတစ်ဦး ကျောင်းကား ပေါ်တွင် ကျောင်းသားများနှင့် စာအကြောင်းများကို ဆွေးနွေး။
၇။ နားမကြားသူများ နားကြားကိရိယာ အသုံးမပြုပါက နားကြားရမည် မဟုတ်ဟု ကျွမ်းကျင် သူများ ပြောကြား။
၈။ ခရီးသည်တင် ကားများတွင် ထိုင်ခုံမရပါက မတ်တပ်စီး၍ လိုက်ပါနိုင်။
၉။ မဆင်မခြင် သောက်သုံးမှုကြောင့် အရက်သမားတစ်ဦး အမူးလွန်။
၁၀။ ရထားစီးစဉ် ပြတင်းပေါက်များ ဖွင့်ထားပါက လေကောင်း၊ လေသန့် ရနိုင်။
၁၁။ မိုးရွာသောနေ့များတွင် လူအများစု ထီးများ ဆောင်း၍ သွားလာလှုပ်ရှားလျှက်ရှိ။
Computer ကို Virus မ၀င်အောင် ကာကွယ်နည်း (၅) မျိုး
၁။ မည်သည့် external device ကိုမှမတပ်ဆင်ပါနဲ့(CD-DVD များအပါအ၀င်)
၂။ internet မသုံးပါနဲ့၊ သုံးရင်လည်း မည်သည့် web site ကိုမှဖွင့် မကြည့်ပါနဲ့၊
၃။ Computer ကို မဖွင့်ပါနဲ့(မီးပလပ် မထိုးပါနဲ့)၊
၄။ Computer ကို အစကတည်းက မ၀ယ်ပါနဲ့၊
၅။ Computer ဆိုင်ရှေ့ကို ဖြတ် မလျှောက်ပါနဲ့၊
သင်၏ဘလော့ဂ်နာမည်ကြီးရန် google,yahoo စသောwebportaကြီးများမလိုပါဒီလိုလုပ်ရင်နာမည်
၁ ။ ဘလော့ဂ်ကိုကြော်ညာရန်သူများ ShoutBox များတဲတွင်သိသိမသိသိသွားအော်ပါ “လာလည်သွားပါတယ် တော်တော်ကောင်းတဲ့ဘလော့ဂ်လေးပါ။တို့ ဆီလည်းလာလည်ပါဦး ဟိုဟိုဒီဒီ ဒီဒီဟိုဟိုဘာညာသာရကာနေကြာကွာစေ့ လျှောက်ရေးပါ
၄။ ဘလော့ဂ်နာမည်ကိုလူများစိတ်ဝင်စားအောင်ပေးပါ ဥပမာ ဟိုဟိုဟာဟာ၊ဒီဒီဒါဒါ၊ဟိုတွင်း၊ဒီတွင်း၊ဟိုဇုန်၊ဒီဇုန်
၅ ။ လူတိုင်၏မွေးနေ့ မျာအတွက်မွေးနေ့ 
ပြီးတော့မွေးနေ့ ဆုတောင်းပိုစ်တင်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးနက်ထဲကတွေ့ သမျှလူတိုင်းကိုလိုက်ပြောပါ
ဖြေ ။ ဂစ်လို့ အော်တဲ့ဌက်တစ်ကောင်မှာတစ်ဗိုက်ဘဲရှိပါတယ်
မေး ။ email ပို့ နေရင်းconnectionပြုတ်သွားတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ရင်
ဖြေ ။ အကောင်းဆုံးကတော့ကွန်ပျူတာပါဝါပိတ်ပြီးအိပ်ပါ
မေး ။ ကွန်ပျူတာထဲဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ရင်ဖြေရှင်းပုံလေးအသေးစိတ်
ဖြေ ။ ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်
၂။ ရှိရှိသမျှ ဟတ်ဒစ်၊မားသားဘုတ်၊ရှိသမျှကတ်
၃။ ပြီးရင်တော့ဆပ်ပြာမှုန့် များများနဲ့ ဖျော်ထားတဲ့
ဇလုံထဲကိုထည့်ပြီး Decogenနဲ့ တစ်ညစိမ်ပါ
၄ ။ နောက်တစ်နေ့ ကျပြန်ဆေးကြောပြီးနေပူပူမှာ
၅ ။ ခြောက်သွေ့ သွားသောအခါပစ္စည်းများကိုနေရာတကျ
၆ ။ စက်ကိုပြန်ဖွင့်သောအခါ VIRUS မရှိတော့ကြောင်းပျော်
ရွှင်ဖွယ်တွေ့ ရပါလိမ့် မည်။
၇ ။ နောက်ပိုင်းသုံးရင်SYSTEM ပုံးကိုဗိုင်းရပ်စ်ထပ်မ၀င်အောင်
ဆရာကြီး kyawcross ခေါ်မောင်ဇူလူးဟုအမည်ရသောအာဖရိကမှဆရာ့ဆရာကြီးက
မေး ။ သမီးကွန်ပျူတာအရမ်းလေးနေလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ် ။ ကူပါဦး
ဖြေ ။ အရင်ဆုံးဟတ်ဒစ်(စ်)ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ ။
မေး ။ကျွှန်တော်တို့ ဘက်ကမီးမှန်ဘူး ။ UPS ကလဲသိပ်မကောင်းတော့
ဖြေ ။ upsနဲ့ ကွန်ပျူတာသွယ်တားတဲ့ပလပ်ကိုချက်ချင်းဆွဲဖြုတ်ပါ။
မေး ။ခဏခဏ restart ကျနေတဲ့အတွက်ဖြေရှင်းပေးပါ
ဖြေ ။ဆိုင်ပို့ လိုက်ပါ
မေး။ ကျွှန်တော့်window ကအဖွင့်အပိတ်ကြာနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
window မှာပြသနာရှိလို့ လား
ဖြေ။ ဟုတ်ပါတယ် window ကိုအဖွင့်အပိတ်ချောင်အောင်ပတ္တာမှာဆီနဲနဲ
ထိုးပေးပါ ။ ကဲဆက်ဖြေမယ်နော်
« Reply #2 on: March 01, 2011, 02:23:21 PM »
ချိန်းထားတဲ့နေရာကို နေမကောင်းတဲ့အမေကိုပြုစုနေရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ ၂ နာရီလောက်နောက်ကျမှရောက်လာမယ် နောက်ပြီးရုပ်ရှင်ရုံလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါအသိတွေ့သွားမှာစိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ ၅ ယောက်လောက်ခုံချားပြီးဝယ်မယ်ရုပ်ရှင်ပြီးလို့အိမ်ကိုသွားတဲ့အခါသင့်ရဲ့အိမ်က Traders Hotel အခန်းလောက်ကောင်းနေရင်တောင်မှစုတ်လှချည်လားလိ်ု့ပြောမယ်နောက်ပြီးသင်အကောင်းဆုံးဝိုင်ကိုဝယ်ထားရင်တောင်မှ ညံလိုက်တဲ့ဝိုင်လို့ပြောမယ် ပုစွန်ထုပ်နဲ့ဝိုင်ကို စားပြီးလို့သင်ကအိပ်ရာပေါ်သွားဖို့ပြောတဲ့အခါ ‘ငါကိုဘယ်လိုကောင်မထင်သလဲထပြန်လိုက်ရမလားလို့ပြောမယ်’ နာရီဝက်တစ်ခါလောက်သင်ကအိပ်ရာပေါ်သွားဖို့ပြောတဲ့အခါတိုင်း အထက်ပါစကားကိုပဲပြောနေလိမ့်မယ် ၃ နာရီလောက်ကြာမှ ခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ အိပ်ရာပေါ်သွားမယ် အိပ်ရာပေါ်ရောက်လို့သင်ကကြိုးစားတဲ့အခါ နာရီဝက်တစ်နာရီလောက်ညင်းလိမ့်မယ် နောက်ဆုံးသင့်ဆန္ဒကိုဖြည့်စည်းမယ်ဆက်ဆံပြီးသွားတဲ့အခါမှာ တစ်ကယ်ချစ်တာနော် တစ်ကယ်လက်ထပ်မှာနော်ဆိုတာကိုမအိပ်မချင်းမေးနေလိမ့်မယ် မနက်အိပ်ရာကနိုးလာတဲ့အခါ ဒီအိမ်ကိုကြိုက်သွားပြီဒီမှာပဲနေတော့မယ်လို့ပြောလိမ့်မယ် နောက်ဆုံးသင့်က Taxi ငှားပြီးသူကိုတင်ပေးလိုက်ရမယ် ပြန်ဖို့ကို သင့်ကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်သူဘေးနားကသူငယ်ချင်းကိုပြောလိမ့်မယ် အဲ့ဒီလူပေါ့ ငါ့ဘ၀ကိုဖျက်ဆီးတာဆိုးပြီးတော့လေ
ချိန်းထားတဲနေရာကိုသင့်ထက်ငါးမိနစ်လောက်စောပြီးရောက်နေလိမ့်မယ် ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ကိုနှစ်ယောက်ခုံကိုဝယ်လိမ့်မယ် ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာစကားလေးဘာလေးပြော လက်ကလေးကိုင်ရင်းရုပ်ရှင်ပြီးလို့ပြီးမှန်းမသိအောင်နေလိမ့်မယ် နောက်ပြီးအိမ်ကိုသွားတဲ့အခါ သင့်အိမ်ကစုတ်နေအုန်တော့ ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ် အညံစားဝိုင်းဝယ်ထားရင်တောင်ဒီဝိုင်ကိုအကြိုက်ဆုံးလို့ပြောမယ့်စားပြီးသောက်ပြီးတာနဲ့ သင်ကအိမ်ရာပေါ်တက်ဖို့ပြောရင်အလိုက်တသိပဲလာပြီး သင်တို့ချစ်စခန်းဖွင့်ကြမယ့် တစ်ညလုံးနီးပါးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ချစ်စခန်းဖွင့်ကြတာ မနက်လင်းခါနီးမှအ်ိမ်ပျော်သွားလိမ့်မယ် သင့်မနက်အိမ်ရာနိုးလာတော့ စားချင်စဖွယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မနက်စာကိုတွေ့လိမ့်မယ် မနက်စာရဲ့ဘေးမှာ စာလေးတစ်စောင်တွေ့မယ့် သင့်စာကိုဖတ်ရင် ‘ ဒါလင်နဲ့နေခဲ့ရတာသိပ်ကြည်နှုးဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်’ လို့တွေ့ရမယ့် တစ်ကယ်လို့သင်ကသူကိုလမ်းမှာတွေ့လို့ ဟေးကိုယ့်ကိုမှတ်မိလားဟိုတစ်နေ့ကမင်နဲ့ချစ်စခန်းဖွင့်ခဲ့တယ်လေလို့ပြောရင် ဒီအကြောင်းပြချက်လေးကမိတ်ဖွဲ့ဖို့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်လို့ပြန်ပြောလိမ့်မယ်။
ဟာသတစ်ခုအနေနဲ့ပဲတင်တာပါ ဖတ်ဘူးတာက တစ်ချားလူမျိုးနှစ်ယောက်ပါ ဒါပေ့မယ့်ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့တင်လိုက်တာပါ မည်သူကိုမှစော်ကားလိုစိတ်မရှိပါ ရယ်ရယုံလေးပါပဲ ဟာသအနေနဲ့ပဲဖတ်ပါခင်ဗျာ
« Reply #3 on: March 01, 2011, 11:13:16 PM »
ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတို့ရဲ့ Answer phone
"မင်္ဂလာပါရှင်... ဖုန်းကိုင်မည့်သူမရှိပါသောကြောင့် "ပိ"သံကြားပြီးနောက်
အကယ်၍ သင်ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ သားသမီးဖြစ်ပါက နံပါတ် ၁ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးနောက်
သင်ထားခဲ့ချင်သော မက်ဆေ့ကို ၁ မှ ၈ အတွင်းနှိပ်ပြီး ရွေးပါ။
အကယ်၍ မြေးထိန်းဖို့ဆိုရင် ၁ ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ ကားငှားဖို့ဆိုရင် ၂ ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ အဝတ်လျှော်ဖို့၊ မီးပူတိုက်ဖို့ဆိုရင် ၃ ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ ကလေးတွေကို ညအိပ်ညနေထားဖို့ဆိုရင် ၄ ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ ကလေးတွေကို ကျောင်းပို့ဖို့ဆိုရင် ၅ ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ထမင်းလာစားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်
ထမင်းဟင်းချက်ပို့ရမယ်ဆိုရင် ၆ ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ အခုထမင်းလာစားမယ်ဆိုရင် ၇ ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ ပိုက်ဆံတောင်းဖို့ဆိုရင် ၈ ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ ကျွန်မတို့ကို ထမင်းဖိတ်ကျွေးဖို့ ဒါမှမဟုတ်
ရုပ်ရှင်လိုက်ပြဖို့ဆိုရင် စကားပြောပါ။ ကျွန်မတို့ နားထောင်နေပါတယ်....
ကျွန်တော်လဲ ဖတ်ဖူးတာလေး ပြန်မျှဝေလိုက်ပါတယ်
« Reply #4 on: March 01, 2011, 11:15:09 PM »
စကပ်တိုတိုဝတ်ထားတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် အဝတ်လျှော်ဆိုင်မှာ
အဝတ်သွားလျှော်တယ်။ အဝတ်လျှော်ဆိုင်ကသူဌေး သူ့စကပ်ကိုပဲ
လိုက်ငေးကြည့်နေလို့ ကောင်မလေးဟာ စိတ်တိုတိုနဲ့ ဘာကြည့်တာလဲလို့
မေးလိုက်တယ်။ သူဌေးက နားမလည်ဟန်နဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
"နင့်စကပ်က ငါတို့ဆိုင်မှာလျှော်ရင်း ကျုံ့သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်"
၄-ဈေးဝယ်ထွက်ရာတွင် အထုပ်ပေါင်းများစွာကို ကိုယ့်အားကိုကိုးဆွဲသယ်ရခြင်း
၅-အိမ်ကစက်ပစ္စည်း ၊လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများပျက်လျှင် ဆိုင်သို့ သာပို့ရရ်ျ
၆-နေရာတကာ မီတာဆောင်၊ဖုန်းခွန်ဆောင် မိမိဘာသာသွားလာ ၇ခြင်း
၈-အများတကာမှ သီတင်းကျွတ်တိုင်းမစားရသေးဘူးလား၊ ဘယ်တော့လဲ၊စသဖြင့်ရိထေ့ငေါ့ခြင်းကို
၁၀-လကုန်တိုင်း ယောက်ျားအပ်သော အပိုပိုက်ဆံကိုမရခြင်း
၁၁-သရဲကားကြည့်ပြီး ကြောက်တိုင်း ခေါင်းအုံးကိုသာတင်းတင်းဖက်ထားရခြင်း
၁၄-ယောင်္ကျားလေးများ၏ မထိတထိစနောက်ခြင်းကို အပြင်သွားလာတိုင်း ခံ၇ခြင်း
၁၇- အိမ်တွင်သူခိုးကပ်သည့်အခါ မအော်ရဲခြင်း
၂၀- သွားချင်ရာသွား..အိမ်ပြန်လာသည့်အခါ စိတ်ပူပန်စွာဖြင့်
၂၂-မိဘများမှ ကလေးကဲ့သို့ နေရာမပေးဆက်ဆံခြင်းကိုသာ တချိန်လုံးခံရခြင်း
၂၄-မိမိလက်စွမ်းပြချက်ထားသမျှ ကောင်းလိုက်တာဟု...ချီးမွမ်းအားပေးမည့်သူ မရှိခြင်း
၂၅-ပွဲလမ်းဘဘင် ၊ အလှူအတန်းများတွင်..အသိစုံတွဲများကြားတွင် တယောက်တည်း
၂၇--မောင်ရေ..ကိုကိုရေ..ဟုချွဲနွဲ့ပြီး အလိုရှိရာပစ္စည်းကို ပူဆာခွင့်မရခြင်း....၊
၂၈-မိမိပြက္ခဒိန်တွင် အထိမ်းမှတ်နေ့ စွဲများမရှိခြင်း၊အထိမ်းအမှတ်
၃၀- တခြားမှာစိတ်ညစ်တိုင်း ရန်လုပ်စိတ်ကောက်ပေါက်ကွဲရန်လူမရှိခြင်း
« Reply #5 on: March 03, 2011, 12:37:26 PM »
လင်မယားစုံတွဲတစ်တွဲတစ်နေ့ကျတော့ သူတို့ရဲ့ မင်္ဂံလာ နှစ် ၄၀ ပြည့် party တစ်ခုကိုကျင်းပတယ် အဲ့ဒီတော့ party ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဆုတောင်းရတယ်လေ ခွက်လေးတွေကိုယ်ဆီကိုင်ပြီတော့ပေါ့ အိမ်ရှင်ယောကျားက သူအရင်ပြော တယ် မိန်းမရေမင်းကိုငါတစ်ခုပြောမယ်ကွာ မင်းဟာ အသက်၂၀ တုန်းက မင်းဟာအစွမ်းကုန်လှပနေတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်နဲ့တူတယ်ကွာ မင်းအသက် ၃၀ မှာတော့တန်ဖိုးကြီး ၀ိုင်လိုပါပဲတဲ့ ၄၀ မှာကျတော့တန်ဖိုးကြီးပြီး သောက်လို့ကောင်းတဲ့ ကော့ညက်အရက်လိုပါပဲ မင်းကိုချစ်မြဲချစ်နေပါတယ် အသက်၅၀ မှာတော့မင်းဟာ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ စန္ဒာရားကြီးလိုပါပဲဒါပေမယ့်မင်းကိုတစ်စက်မှအချစ်မပြက်ပါဘူးလို့ဆုတောင်းရင်အရက်သောက်လိုက်တယ်တဲ့ သူမိန်းမကလည်းအားကျမခံပြန်ဆုတောင်းတယ်ဗျာ အစ်ကိုပြောတဲ့ ကျမဟာ အသက်၂၀ မှာ အစွမ်းကုန်ပွင့်လန်းနေတဲ့ ပန်းကလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့်အစ်ကိုဟာ အရိုးတံနဲ့အဆူးကိုပဲရခဲ့သူပါတဲ့ မွေးလွန်းတဲ့ပန်းကိုမနမ်းခဲ့ရပါဘူးတဲ့ အသက်၃၀ မှာ တန်ဖိုးကြီးဝိုင်အရက်လိုပဲဆိုတာလည်းမှန်တယ်တဲ့ ဒါပေမယ့်အစ်ကို က ပုလင်းဖင်ကပ်သာသောက်ခဲ့ရတာပါတဲ့ အသက်၄၀ မှာတန်ဖိုးကြီးပြီးသောက်လို့ကောင်းတဲ့ကော့ညက်အရက်တဲ့တူတာမှန်ပါတယ်တဲ့ ဒါပေမယ့်အစ်ကိုက သုံးယောက်မျှသောက်ခဲ့ရတာပါတဲ့ နောက်ဆုံးအသက်၅၀ မှာ စန္ဒရားနဲ့တူတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်တဲ့ ဒါပေမယ့်အစ်ကိုအခုချိန်တိ စန္ဒရားမတီးတတ်သေးပါဘူးတဲ့ ဗျာ
« Reply #6 on: March 03, 2011, 04:31:35 PM »
Quote from: jayjay on March 01, 2011, 11:15:09 PM
« Reply #7 on: March 03, 2011, 07:26:17 PM »
ဟင်း.......... မာယာကလဲ မသိတဲ့သူတွေ ကျနေတာပဲ
ဒီမှာ တစ်ယောက်လုံး ဘေးနားမှာ ငုတ်တုတ် ရှိနေတာတောင် အပျိုကြီး လုပ်ချင်သေးတယ်
« Reply #8 on: March 03, 2011, 11:09:42 PM »
Quote from: jayjay on March 03, 2011, 07:26:17 PM
ဟင် ဒီနဂျေ တကောင်
ငါ့ဖာသာ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာတောင် အေးဆေးမနေရဘူး
« Reply #9 on: March 05, 2011, 08:44:41 PM »
ကျွန်တော် ဆေးပညာလောကရဲ့ ဟာသလေးတွေ အလွဲလေးတွေလဲ ဒီတော့ပစ်အောက်မှာပဲ ဆက်တင်သွားမယ်နော်
သူများတွေလဲ ဇာတ်လမ်းကလဲ ကောင်းကောင်းရေးမတတ်. အချိန်ကလဲ သိပ်မရှိသေးတော့ ဟာသလေးတွေပဲ
နောက်များ အချိန်ရမှာပဲ တပ်ကြပ်ကြီးထက်ကြီးအောင် (ဘာကြီးလဲ မသိ)
လောလောဆယ် သူက ကြားထဲက တစ်မှတ် ၀င်ယူသွားတယ် အပေါ်မှ တပ်ကြပ်ကြီး ပို့စ်ကို ဖတ်ကြကုန်......
Pages: 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 » | Go Up